မာရိကဆုတောင်းကျမ်းစာနှင့်မညီဖြစ်ပါသည | Apg29
ဒါကြောင့်လက်ခံရရှိထားတဲ့စိတ်မချရအယူဝါဒဖြစ်ပြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းထုတ်ဖော်ပြသရပါမည်။ သမိုင်းကွဲပြားခြားနားသောယဉ်ကျေးမှုများနှင့်သည် "ကောင်းကင်ဘုံ၏ဘုရင်မ" ၏မှော်အတတ်အတွက်ကိုးကှယျမှုမှတဆင့်ရှိပါတယ်။ အဝေးဆုံးနောက်ကျောကျောနိမ်ရောဒ၏မယား, Semiramis မှခြေရာခံနိုင်ပါတယ်။ သူမ၏သားတမ်မုဇယူဆောင်တော်မူပြီးမှ, သူမကမိုဃ်းကောင်းကင်မိဖုရားနှင့်ခေါင်းကိုင်အမေနှစ်ဦးစလုံးကိုခေါ်။ (1 တော။ 10: 8-9) ။
ရုံအမည် "ကောင်းကင်ဘုံ၏မိဖုရားက" ကက်သလစ်ဘုရားကျောင်း, မာရိအားပေးပြီးမှနာမည်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည်မာရိနဲ့လူငယ်တစ်ဦးကလေးသူငယ်အပေါငျးတို့သညျဤရုပ်ပွားတော်ကိုမြင်သောအခါ, ဒါနိမ်ရောဒ၏မယားနှင့်သား၏ပုံရိပ်ကိုသူတို့ထဲကတစ်ဦးမိတ္တူဖြစ်ပါသည်။
ကလေးသူငယ်အခ gudamodern ၏စိတ်ကူးကွဲပြားခြားနားသောယဉ်ကျေးမှုများတွင်နေထိုင်ခဲ့သိရသည်။ ကက်သလစ်ဘုရားကျောင်းရန်အစွန်းရောက်လွှဲပြောင်းအချို့သောသိပ္ပံပညာရှင်များ 300-ရာစုကနေဆင်းသက်ကြပြီးသူမ၏သား Horus နှင့်အတူ Isis ကိုးကွယ်လျက်ရှိရာအဲဂုတ္တုပြည်၌မွေးဖွားခဲ့သည်ယုံကြည်သည်။ အဆိုပါအကြံအစည်ဒီကဗျာဖြစ်ပါတယ်။ ရုပ်ပုံကိုကြည့်ပါ။
The New Encyclopedia Britannica, သင်အောက်ပါအချက်အလက်များယူနိုင်သည် "ဟုအဆိုပါခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းထုအတွက်ကွန်နှင့်တပါးအမျိုးသားတို့သည်အောက်ရှိ [ရောမ] အင်ပါယာအသင်းတော်ဘုရားကျောင်းသို့ထုတ်လွှင့်သောအခါဘုရားသခင်၏မယ်တော်ကိုးကွယ်မှုတစ်ခုထပ်တိုးလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ နှစ်ပေါင်းထောင်ပေါင်းများစွာ၏ '' မဟာမိခင် '' ၏ကိုးကှယျခွငျးနဲ့ 'ဘုရားသခငျ့ကညာ' ဗာဗုလုန်အာရှုရိအဟောင်းရိုးရာဘာသာတရားတခုမှဦးဆောင်မယ့်ဖွံ့ဖြိုးမှုကြောင့် shaped ခဲ့မှုအတွက် ... သူတို့ရဲ့ဘာသာတရားကိုင်းရှိုင်းခြင်းနှင့်ဘာသာရေးဝိညာဏ်ရှိခဲ့ပါတယ်။ "
ဤတွင်ကျနော်တို့မိခင်နတ်ဘုရားမရဲ့ဒီကိုးကှယျမှုအယူမှားဘာသာတရားမှဆင်းဘယ်မှာသညျဘုရားသခငျ၏တရားစကားမဟုတျကွောငျးတွေ့ပေမယ့်အယူမှားဝါဒကနေလို့ရပါတယ်။ သာဤအချက်ကို, မျက်စိ-ဖောက်တံဖြစ်နှင့်မာရိ၏ဝတ်ပြုကိုးကွယ်မှုနဲ့ကြီးစွန်းတိုင်အောင်တက်သင့်တယ်
ကက်သလစ်ဓမ်မပုစ်ဆာမာရိသည်အားလုံးအပေါ်ကြောင်းကိုပြောပါတယ်, ဒါပေမယ့်သမ်မာကမျြးသညျယရှေုကြောင်း says: "သူတို့ဘိုးဘေးတို့ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, အဘယ်သူကိုခရစ်တော်၏ဘုရားသခငျသညျအစဉျအမွဲကောင်းကြီးမင်္ဂလာ, ကျော်အားလုံးသူသည်လူသားတစ်ဦးဖြစ်ခြင်းကြောင့်ရောက်လေပြီ။ ။ "ရောမမြို့ကိုအာမင်။59 ။
ဒါဟာအလွန်ထူးခြားတဲ့နှင့်ကက်သလစ်ဘုရားကျောင်းကမျြးစာကိုဆန့်ကျင်သွန်သင်ထုတ်ဖော် - ဒီတစ်ခုကဒီဘုရားကျောင်းစွန့်ခွာဖို့လုံလောက်တဲ့ဖြစ်သင့်သည်။ ဒါကြောင့်မလိုချင်ဖို့ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ဘာသမ္မာကျမ်းစာကဤသို့ဆိုသည်နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ကက်သလစ်ဘုရားကျောင်းသွန်သင်နှိုင်းယှဉ်တစ်ခုအပြင်ဘက်တွင်လေ့လာသူမှသိသာသောအရာကိုမမြင်ရနိုင်ပါ။ ကိုယ့်ချည်းနှီးကြိုးစားမှုဘယ်လောက်သင်တို့သည်ဤမျှသိသာသောအရာကိုဖုံးကွယ်ဖို့ကြိုးစားမယ့်
ဒါဟာဒီဘုရားကျောင်းပိုင်သူကိုကလူနှင့်အခြားခရစ်ယာန်ပွင့်လင်းသူ၏မျက်စိရှိခြင်းသောမျှော်လင့်ချက်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်, ဒီအရေးအသား၏အဖြစ်အလိုဆန္ဒဝေဖန်မှုများမဟုတ်ပါဘူး။ ခွင့်လွှတ်ခြင်းအဘို့အဘုရားသခငျသညျတောငျးဆိုန, သင်မာရိအားဆုတောင်းပဌနာရှိသည်။
ယရှေုသညျ "ဒါဟာကျမ်းစာလာသည်ကား: အဆိုပါသင်၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားကိုသင်သည်ကိုးကွယ်တယောက်တည်းသာသူ့ကိုသင်အစေခံရကြလိမ့်မည်။ ", ဖြေကြား Lk ။ 4: အဋ္ဌ
ကျနော်တို့ဓမ်မပုစ်ဆာမာရိသညျအကွောငျးကိုပြောပါတယ်အရာအားလုံးကိုမျိုးပွားမလား, ငါတို့ကကြီးမားတဲ့အာကာသနှုနျးဖို့ရှိသည်လိမ့်မယ်။ ဒါဟာကျနော်တို့ကမျြးစာကိုအတွက်အရေးဆိုမှုထောက်ခံမှုရှာတွေ့မယ်လို့ဘဲ, ပြီးတော့ကျနော်တို့နှလုံးဤမယူကြဘူးအမှုကိုပြုနိုင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ 1 ကောရိန်သုအတွက်ခေါ်ဆိုခအပေါ်ဖြစ်မယ့်အစားလိုအပ်ပါတယ်။ 4:6က "ကျမ်းစာ၌အဘယ်သို့မိန့်ထက် ကျော်လွန်. မသွားဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုကြွလာတဲ့အခါသင်စိုးမိုးရေးသင်ယူဖို့ပါ။ "
သင်တို့ရှိသမျှသည်မာရိအားစွပ်စွဲမဟုတ်တဦးတည်းတွေ့ဆုံးမဩဝါဒပေးဓမ္မသစ်ကျမ်းကိုသွားပါ။ ကျနော်တို့တမန်တော်ကမာရိကက်သလစ်ဘုရားကျောင်းမဆုံးမသွန်သင်သောမည်သည့်အချက်မှာတှေ့ရပါဘူး။ သူတို့အညီကျမ်းစာလာသည်အပေါ်တည်ထောင်ခဲ့သည်မဟုတ်အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ထိုကြောင့်ငါတို့သည်ထိုအသွန်သင်ချက်တွေကိုငြင်းပယ်။
သွန်သင်ချက်ကိုပထမဦးဆုံးရာစုနှစ်များစွာထဲမှာမရှိကြ၏။ သူတို့ပေါ်ထွက်လာဖို့စတင်အဖြစ်ထို့နောက်ဧဖက် 431 ပြောင်းလွဲမှုများကိုလူ့မာရိသညျဘုရားသခငျ၏မိခင်အတွက် 325 အတွက်သာအနည်းငယ်ရာစုနှစ်များစွာအကြာတွင်နိုငျစီယာကောငျစီဖြစ်ပါတယ်။ ထို့နောက်သူမကကွဲပြားခြားနားသောအမည်များförebedjerska, စဉ်ဆက်မပြတ်ကညာ, အပြစ်မဲ့, nådeförmedlerskaနှင့် Co-ရွေးနှုတ်တော်မူရရှိသွားတဲ့။
ကက်သလစ်ဘုရားကျောင်းမာရိ၏မြင့်၏စည်းကမ်းချက်များ၌အလွန်ရှည်လျားသည်နှင့်ဤအရပ်ကိုလည်းဝေးကမျြးစာကိုသူမ၏အကြောင်းကိုအဘယ်သို့မိန့်တော်မှ။ ကက်သလစ်ဓမ်မပုစ်ဆာ၏အပိုဒ် 969 ၌ဤ says: "ကျေးဇူးတရား၏နိုင်ရန်အတွက်မာရိ၏ဒီသားဖွားသူ Annunciation မှာယုံကြည်ခြင်း၌အပ်ပေးတော်မူ၏နှင့်သူမခြောလက်ဝါးကပ်တိုင်ထံသို့ပြန်သွားခွင့်ပြုချက်နှင့်အတူစတင်ခဲ့သည်။ သူမသညျကောငျးကငျမှတက်ကြွသည့်အခါသူမသည်သူ၏ရှေးနုမစ်ရှင်ကိုမကျန်ရစ်စေ၏။ အားလုံးအစဉ်အမြဲစုံလင်ခြင်း Featured တိုင်အောင်ပြတ်တောက်ခြင်းမရှိဘဲဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်။ သူမငါတို့အားထာဝရကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရာလက်ဆောင်များ frustrates ယင်း၏ထူးထူးအပြားပြားကြားဝင်အသနားခံမှတဆင့် .... ထိုကြောင့်မင်္ဂလာရှိဗာဂျင်းယိုစီးမှုတွေစစ်ထုတ်ဖို့အတွက်နဲ့သိရှိစေရန်ကူညီခြင်း, Patroness, တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေအဖြစ်မဖြစ်၏ဖြစ်ပါတယ်။ "
ဒါဟာမာရိအား "သူ၏ရှေးနုမစ်ရှင်။ " စွပ်စွဲနေသည် ဒါဟာချွေတာရေးမစ်ရှင်ခဲ့သူကိုယရှေု, သာယရှေု, ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာမာရိသည်လည်းရှိကြောင်းကက်သလစ်ကပြောပါတယ်။ ဤသည် add-on တစ်ခုညျဘုရားသခငျ၏စကားလုံးအဘယ်သို့မိန့်သည်။
ဘုရားသခငျ၏တရှင်းရှင်းလင်းလင်းသတင်းစကားနှင့်အတူဤနှိုင်းယှဉ်: "ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရှိသည် ဖြစ်. , မိုဃ်းကောင်းကင်ကလူကျွန်ုပ်တို့သည်ကယ်တင်ခြင်းရမည်ဖြစ်သည်သောမှတဆင့်မကအခြားအမည်အားသည်မဟုတ်လော။ " တမန်တော် 4:12 ။
ယရှေုသညျကိုဘယ်လိုဆုတောင်းဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုဆုံးမသွန်သင် "ထိုကြောင့်မင်္ဂလာရှိအပျိုစင်မဖြစ်၏": "ထိုအခါသမျှသင်တို့သည်ငါ၏နာမကိုအမှီမေးဖို့ကျွန်မပြုပါမည်မညျးတျောကိုဘုနျးပှငျ့ဖြစ်သင့်ကြောင်းတူညီသောအချက်ကောင်းစွာသင်ပြောပါအခါကျမ်းစာကိုအမှီ ပြု. အဘယ်သို့ပြောသည်ကိုကျော်လွန်နိုင်ပါတယ် သားတော်၌တည်၏။ "ယောဟနျ။ 14:13 ။ ဒါဟာကျနော်တို့ဆုတောင်းပဌနာသောအခါကြှနျုပျတို့လိုက်နာရမည်ဖြစ်သောယေရှုရဲ့ညွှန်ကြားချက်မဟုတ်ဘဲကက်သလစ်ဘုရားကျောင်းရဲ့အနနေဲ့ဘာသာရေးအမေး, အပြီးဖြစ်ပါတယ်။
မာရိသညျအပွစျဖွမပါဘဲမွေးဖွားခဲ့လည်းကက်သလစ်အသင်းတော်၌ပြုသောအမှုထားပြီးတဲ့ဖြည့်စွက်ဖြစ်ပါသည်, သမ်မာကမျြးလူအားလုံး (ရော။ 3:23) ပြစ်မှားမိကပြောပါတယ်။ ဤသည်မကြာသေးမီကတရားသေအယူဝါဒတစ်နှစ်အဖြစ်ဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ် 1854th
သို့တိုင်အကြာမှာအားလုံးသူတော်စင် '' နေ့တွင်, မာရိသညျကောငျးကငျဘုံ, ခန္ဓာကိုယ်နှင့်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုစဖွင့်ခေါ်ဆောင်သွားသည်ဟုကျင်းပဒီ 1950 ခုနှစ်တွင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့်ဘုရားကျောင်း, ကောင်းကင်ဘုံမှမာရိရဲ့ဝန်ခံချက်အပေါ်ထို့နောက်ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး Pius XII, ကက်သလစ်ဘုရားကျောင်းရဲ့သင်ကြားမှုအုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။ ဒါဟာမာရိအားအောက်ပါအယူဝါဒနှင့်အတူဖန်တီးခဲ့: "။ ဗာဂျင်းကိုခံနိုင်ရည်, သူ့မွကွေီးဘဝလမျးစဉျကိုလက်စသတ်ပြီးမှ, ခန္ဓာကိုယ်နှင့်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုကောင်းကင်ဘုန်းအသရေထဲသို့ဝငျ"
ကျနော်တို့ 1950 ခုနှစ်ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးရဲ့ကွှေးကျွောခွငျးထင်ဟပ်ကြောင့်အထူးသဖြင့်ဖြည့်စွက်ကက်သလစ်ဒေသနာမည်သူမဆို, "ဆန္ဒအလျောက်ငြင်းပယ်ဝံ့သို့မဟုတ်ကျနော်တို့သတ်မှတ်ကြပြီသံသယအကြောင်းကိုအောက်ပါကပြောသည်အဖြစ်ထူထောင်ဒီအယူဝါဒသစ်ပြီးနောက်တိုက်ရိုက်ဖွဲ့သောမှတ်သားဖွယ်သောစာရွက်စာတမ်းများ သူကလုံးဝဘုရားသခင့နှင့်ကက်သလစ်ယုံကြည်ခြင်းမှပြိုလဲကြောင်းကြားပြောလေ၏။ "
ဟုတ်ပါတယ်, သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည်ဘုရားသခင့နှင့်ကက်သလစ်ယုံကြည်ခြင်းမှကွာလဲသေကြပြီအကြောင်း, တဦးတည်းကဒီခြိမ်းခြောက်မှုမှာတအံ့တသြနှင့်ဒီမှာပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး၏ဝိညာဉ်ကိုရှင်းလင်းကြောင်းပြီးနောက်ဤအယူဝါဒကိုထူထောင်ကြဘူး။ ပထမဦးစွာအဘယ်သူမျှမဘုရားသခငျ့ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်လည်းမရှိ, ကတဦးတည်းမှဆုံးရှုံးခြင်းသို့ရောက်ကြလိမ့်မယ်ဒါက 1950 အတွက်ဥပဒေ, တဦးတည်းကဒီအယူဝါဒခိုင်မာသွားလျှင်ဘုရားသခင့ရာဇပလ္လင်ကနေကျဆင်းသွားကြောင်း, ဒါကြောင့်မဟုတ်ဘဲဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ပါသည်, ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်၌တှေ့ရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး ကက်သလစ်ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်မယ့်အစားကမျြးစာကိုလုပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်ဆိုရာထွက်ပြေးကျမ်းစာနှင့်မညီသောအယူဝါဒခြင်းမရှိဘဲ, လွန်ကျူးခံရဖို့မကျန်းမာနိမိတ်အဖြစ်ရည်ညွှန်းရပါမည်။
ဤအခြိမ်းခြောက်မှုများဒီလူ့သင်ယူမှုကိုလက်ခံကြဘူးနှင့်အတူအဘို့ဤအသင်းတော်၌သူတို့၏ယုံကွညျခွငျးကိုထားသူကက်သလစ်ခက်ခဲဖြစ်ရပါမည်။ ဒီတစ်ခါလည်းသင်ဤသည်၌ယုံကြည်နှင့်ဤအသင်းတော်၌ဆက်လက်ရှိနေရန်ကြောက်လန်စေသည်, ထို့နောက်ကောင်းစွာဒီပုပ်ရဟန်းမင်းအထုတ်ပြန်ချက် ပို. ပင်ဒီဘုရားကျောင်းနှင့်ကျမ်းစာနှင့်မညီသွန်သင်ချက်ကိုလူခညျြနှောငျအားမိမိအမိန့်ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။
ကက်သလစ်အသင်းတော်၌မာရိရဲ့အလယ်ဗဟိုကအလွန်မှန်ကန်သည်နှင့်အလွန်အဆိုးဆုံးအရာသည်ဤသညျယရှေုသညျဘုရားသခငျ, ကမ္ဘာ၏ကယ်တင်ရှင်၏သားတော်မိုက်စေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒါဟာခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းမာရီယာဟာမိုဃ်းကောင်းကင်မိဖုရားနှင့်အခြားအပိုဆောင်းအမည်များဖြစ်လာမှတစ်ဦးဘုရားသခငျ့မစ်ရှင်နှင့်အတူသာမန်ယောက်ျားသည်ဖြစ်ခြင်းကနေပြောင်းလဲနေတဲ့ကြောင်းပင်တေကုတ္တေမှာစတင် 400 အကြောင်းကိုနှစ်အကြာတွင်ဖြစ်ပါသည်။
ဒါဟာမာရိနဲ့ကလေးကရုပ်ပွားတော်၏အစဉ်အလာကက်သလစ်ဘုရားကျောင်းသို့ propagate လုပ်ဘူးသောအစွန်းရောက်ထံမှပါပဲ။
ဤသည်ကက်သလစ်ဘုရားကျောင်းထဲမှာရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာကိုကျော်ပေါ်ထွက်လာတဲ့အစဉ်အလာဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်ဤလူ့အစဉ်အလာအဘို့အဘယ်သူမျှမအခွင့်အာဏာရှိပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ခရစ်ယာန်ယုံကြည်ခြင်းသမ္မာကျမ်း၏အခွင့်အာဏာများနှင့်တမန်တော်များ၏သင်ကြားမှုအပေါ်အခြေခံပြီးနှင့်အရာကသူတို့မရှိခြင်းအားဖြင့်မာရိ၏လို့လညျးထှနျးလငျးပေးပါသည်။ ထို့ကွောငျ့ကြှနျုပျတို့သရဲရငျ့စှာမာရိသညျအကွောငျးကိုယင်း၏သွန်သင်ချက်ကနေကျွန်တော်တို့ကိုလှတျမွောကျစနိုင်ပါတယ်။
ကက်သလစ်ဘုရားကျောင်းကဒီဧရိယာ၌ကျမ်းစာရဲ့သွန်သင်ချက်တွေကိုကနေသေးငယ်တဲ့သှဖေနှင့်အတူစတင်ခဲ့သည်။ ဒါဟာဖြောင့်မျဉ်းကြောင်းမှပယ်အခက်များလိုင်းရေးဆွဲတာဖြစ်ပါတယ်ပိုကြောင်း, ဝေးတဲ့ဝေးဇာစ်မြစ်ကနေဖြစ်လိမ့်မည်ဟုတစ်လိုင်းဆွဲရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဒါကြောင့်ကက်သလစ်အသင်းတော်၌မာရိသညျအပျေါသှနျသငျနှငျ့အတူရှိခဲ့။
ဒါဟာတစ်ဦးချင်းစီကက်သလစ်ရှုတ်ချဖို့သာကျမ်းစာ၌ရေးထားသည်မဟုတ်ဖြစ်ပါတယ်။ သင်ကကက်သလစ်ဘုရားကျောင်း၏ထိုကဲ့သို့သောအစဉ်အလာထဲမှာကြီးပြင်း, ဒီအယူဝါဒနှင့်အတူမှားဖို့မကျြစိကှခံရဖို့လွယ်ကူပါတယ်။ ကျမ်းစာ၌ရေးထားဒီသင်ယူနှင့်တွေ့ကြုံခံစားယေရှု၏တပြင်လုံးကိုဦးတည်ချက်, ကယ်တင်ခဲ့သူတဦးတည်းနှင့်အရှင်ငါတို့သည်ဘုရားသခင်၏ဖို့ဆုတောငျးသငျ့ unhealthy ကိုချိုးဖျက်ဖို့ကက်သလစ်များအတွက် tool အဖြစ်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။
ဒါဟာကျနော်တို့ကက်သလစ်ဘုရားကျောင်းပေါင်းများစွာကျမ်းစာနှင့်မညီသှနျသငျ, မာရိ၏အစွန်းရောက်သောအရာတစျခုနဲ့ဘုရားကျောင်းကြောင်းသတိပြုပါကြောင့်ဝမ်းနည်းမှုနှငျ့အတူရှိ၏။ တကယ်တော့သူ့သား, ယရှေုသထက်နညျးလမျးမြားစှာ, မာရိ loftier အတွက်, ဤသူသည်သင်တို့ရနိုင်ပုံကိုမှားယွင်းတဲ့အကြောင်းကိုအရာအားလုံးကပြောပါတယ်။
ဒါဟာဒဏ်ခံစင်ကြင်နာမှုမာရီယာ၏ဤစိတ်မချရချဉ်းကပ်ကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့ကြကုန်အံ့ ecumenical ဖြစ်သည်မဟုတ်။ ကျနော်တို့လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်ရှိသည်နှင့်မာရိနဲ့ပတျသကျတဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်တဲ့သွန်သင်ချက်တွေကိုပယ်ကြရဖို့အကူအညီကက်သလစ်မှအသုံးပွုနိုငျသော။
အဘယ်အရာကိုသင့်အသီးအသီးသင်တန်းဤနည်းလုပ်ဖို့ကျနော်တို့ဒီမှာကက်သလစ်ဘုရားကျောင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးရေးထားပြီ။ တစ်ဦးကတကယ်တော့ကက်သလစ်ဘုရားကျောင်းနှင့်၎င်း၏သွန်သင်ချက်တွေကိုထုတ်ဖေါ်ဖို့သိသာစဉ်းစားခဲ့ကြသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကျောင်းကသားသမီးများ၏ပညာရေး၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်တရာတစ်ဦးအကြောင်းကိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများအတွက်ကျောင်းများအတွက်သိသာဒါ။ ဘယ်လောက်ထက်ပိုသောအသင်းတော်များမူဘောင်ငါတို့သည်မဟုတ်ထို့နောက်ပြည်နယ်ဖတ်စာအုပ်များ၌ဤကျောင်းများတွင်ပညာရေး၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ခံစားရတယ်နေစဉ်ကက်သလစ်ဘုရားကျောင်း, အတိုကောက်အဘယ်သို့သောအကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်သင့်ပါတယ်။
ကျနော်တို့ C. T က Odhner ၏သား၏သမိုင်းအတွက်ဖတ်စာအုပ်ကိုးကားပါလိမ့်မယ်။ ဤသည်ကျောင်းစာအုပ်ကျောင်းကိုသားသမီးများ၏ပညာရေးအတွက်အများအပြားဆယ်စုနှစ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်။ ဒီကက်သလစ်အယူဝါဒများနှင့်အဖွဲ့အစည်းများ၏ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးမတိုင်မီရေပန်းစားခဲ့သောကက်သလစ်ယုံကြည်ခြင်းတရားကိုကရှင်းပြသည်ဒီတော့: "အဆိုပါခရစ်ယာန်ယုံကြည်ခြင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘိုးဘေးတို့အားဟောပြောခဲ့သည်, စင်ကြယ်သောခရစ်ယာန်ဘာသာ, ကျမ်းစာ၌အဲဒီမှာထုတ်လုပ်ကြောင်းထိုကဲ့သို့သောပေမယ်ကက်သလစ်အယူဝါဒကြဘူး။ ဤသည်အများအပြားလူ့တီထွင်မှုနှင့်အတူရောထွေးဖြစ်လာအချိန်သင်တန်းကာလအတွင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ သူတို့က (ဗာဂျင်းမာရိနဲ့သန့်ရှင်းသူက "ဘုရားသခငျ၏မိခင်" ပို. ပင်ဖြစ်ကောင်းတစ်ယောက်တည်း Triune ဘုရားမဟုတ်ကိုးကွယ်ဒါပေမယ့်လည်းများနှင့်။ IE သေခံတော်မူပြီးနောက်သန့်ရှင်းခြင်းနှင့်နတ်ဘုရားအဖြစ်ကိုးကွယ်လျက်အဖြစ်မှတ်ဖွစျလာသူ, ဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့သောလူ။ ဒါဟာအစရောမပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးခရစ်တော်ဖြစ်ကြောင်းကိုယုံကြည် မြေကြီးတပြင်နှင့်သခင်၏တပြင်လုံးကိုဘုရားကျောင်း၏အုပ်ချုပ်ရေးမှူး, ထို့ကြောင့်အားလုံးပညတ်တော်တို့ကိုတော်ကိုနား ထောင်. , "သန့်ရှင်းသောခမညျးတျောသညျ" ဟုခေါ်တွင်။ မည်သူမဆိုသူ့ကိုဆန့်ကျင်ဖို့မလျှောက်ဝံ့ကြပါလျှင်သူ excommunication နှင့်အတူအပြစ်ပေးခံခဲ့ရသည်, ဆိုလိုသည်မှာဝတ်ပြုမှုရှိသောအသင်းတော်နှင့်စက္ကမင်မင်္။ "End quote Odhner ၏မိတ်သဟာယဖွဲ့ကနေဖယ်ထုတ်လိုက်။
V 03, onsdag 20 januari 2021 kl 04:43